Raw Fasoracetam ntụ ntụ (110958-19-5) hplc ma98% | AASraw Nootropics
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / Fasoracetam ntụ ntụ
SKU: 110958-19-5. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Fasoracetam ntụ (110958-19-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Fasoracetam ntụ ntụ bụ ọcha na-enweghị ntụpọ na-enweghị ntụpọ, nke dị oké ilu na uto. Ọ bụ ihe mgbochi-amnesiac karịa piracetam, na-eme dị ka usoro etiti mba na-akpali akpali. Ọ bụ nkwalite choline uptake enhancement na-amụba nitric oxide synthase ọrụ ke cerebral cortex. Dị ka piracetam, a ga-ewepụ ihe na-emetụta ike nke pramiracetam site na adrenalectomy.
Fasoracetam ntụ ntụ video
Fasoracetam ntụ ntụ isi agwa
aha: Fasoracetam ntụ ntụ
Ọbara arọ: 158.15
Nchekwa Nche: Chekwaa na ụlọ okpomọkụ ma ọ bụ ngwa nju oyi
agba: White ma ọ bụ na-acha ọcha ntụ ntụ
Raw Fasoracetam ntụ ntụ ntụ ntụ na ụbụrụ na-eme ka ojiji
Burkinaracetam ntụ nwere aha aha ahia dịka LAM 105, NFC-1, NS 105.
Raw Fasoracetam ntụ ntụ Usage
Na nke a ngwa ngwa, ụwa nke oge a na-achọ ndị mmadụ ka ha nwee ike iche ngwa ngwa n'ụkwụ ha na ịrụ ọrụ dị iche iche maka arụmọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ọ bụla; site na ndị ọkachamara ahụike gaa ọrụ kachasị ụgwọ ọrụ ego. Mkpa ọ dị ịnọgide na-aga n'ihu, ịsọ mpi na imezu ya na-egosi na ụlọ akwụkwọ kọleji na mba nile. Ọ dị mkpa inweta akararị kachasị elu ma dee akwụkwọ kacha mma; mgbe nile, nke ahụ bụ nanị ụzọ isi merie na America oge a. Ụmụ akwụkwọ, ọkachamara na ndị nkịtị niile nwere ike ịchọrọ imeziwanye ọrụ ha. Nootropics bụ ezinụlọ ndị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe nke nwere nnukwu mmasị ma na-egosi ọtụtụ ihe eji eme ihe. Onye ọ bụla n'ime ọgwụ ndị ahụ a maara dịka, ezinụlọ racetam, sitere na mbụ nootropic, piracetam. Ndị ọgwụ ọjọọ a na-arụ ọrụ iji mee ka ncheta na iche echiche uche dị iche iche, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, nke mere ka ha bụrụ ndị a ma ama n'etiti ụmụ akwụkwọ kọleji. N'oge na-adịbeghị anya, otu n'ime akwụkwọ ntụpọ bụ Fasoracetam ntụ ntụ, ma ọ bụ aha ya kwesịrị ekwesị "5 - [(piperidin-1-yl) carbonyl] pyrrolidin-2-one", nke dị ntakịrị (Rajaganapathy na et. Al , 5127). Akụkụ a, bụ nke a maara dị ka ntụpọ Fasoracetam, na-egosi na ọ na-ekwe nkwa.
Enweghi usoro ozo nke osusuracetam maka umu mmadu. Ihe omuma nke anecdot na-atụ aro ka ọ dịkwuo obere nhazi gburugburu 10 - 15 mg na nnukwu doses na 30 - 50 mg kwa na-eje ozi ugboro atọ kwa ụbọchị.
Uru nke Fasoracetam ntụ ntụ na-emekarị ka ọ bụrụ ihe mgbakwasị ụkwụ, ma e nwere ụfọdụ ọmụmụ iji gosi na ị ga-emekọrịta. Nyere na e nwere ọtụtụ nde ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma na-eji ọgwụ ADHD dabeere na amphetamine, nchọpụta ule nyochaa fasoracetam bụ ezigbo ihe ịrịba ama. Ọbụna ka mma, Fasoracetam ntụ ntụ emeela ya na-adọ II na III nke ọnwụnwa na-adakarị, bụ nke nwere ike ịkwado oke dị irè maka nzube a. N'ihe dị ka June 2016, ọgwụ ahụ ka nọ na ọnwụnwa ndị a.
Dika akuko akwukwo banyere akobara ajiko ajiracetam, uru ndi na-eche echiche ma na mkpali bu uzo. Otu onye jiri mmetụta mmetụ ahụ tụnyere enweghị onye ọzọ na onye ọzọ kwuru na ọ bụ ihe mmetụ ike karịa mkpali.
E wezụga ihe ndị a na-atụle na uru ndị metụtara ịta ahụhụ, enwere ihe àmà maka mmetụta na-adịghị mma. Otu nnyocha nchịkọta gosiri na ụrọ ntụpọ nke Fasoracetam nwere ike igbochi disruptions. Nke a bụ otu n'ime ọgwụ ndị na-egbu egbu ma nwee uche na ụkọ ntụracetam ga-egosipụta ọtụtụ n'ime ihe ndị a.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị nke Fasoracetam ntụ ntụ dị ka onye na-egbochi ọgwụ na nchegbu. Nnyocha nke oke na enweghi enyemaka na-egosi na ọgwụ ahụ nwere mmetụta ndị na-emetụta antidepressant na-enweghị mmetụta ụfọdụ (dịka mmekọrịta mmekọrịta MAOI). Ọmụmụ ihe a kwubiri na iwu GABA (B) nwere ike ime ka ụmụ anụmanụ nwekwuo ule.
Ịdọ aka ná ntị na akụrụngwa dị na Fasoracetam
Enweghi mmetuta ozo nke Raw Fasoracetam kpuchie na akwukwo sayensi, ma nke a aputaghi na o nweghi ihe ize ndụ. Ọ bụghị naanị na ịṅụ ọgwụ ọ bụla na-abịa na ihe ize ndụ, ma ihe ndekọ dị iche iche nwere ike ịkọrọ anyị ihe ụfọdụ banyere ọgwụ ọjọọ.
Maka otu, akụkọ ụfọdụ na-akọwa mkpesa na orgasms. Onye a kapịrị ọnụ akọwawo mmetụta a, ma o yiri obere ma eleghị anya na-agbagwoju anya na ndị ọzọ mgbanwe.
Ogologo oge ndi oru nootropics nwere ike iche na Raw Fasoracetam uzuzu bu ujo (o yiri ka obu onye ozo bu kwa owa), ma nke a bu ihe odide ihe omimi nke bu uzo nke ezinulo racetam. N'ịkọwapụta na 1960s, piracetam bụ onye mbụ n'ime ezinụlọ ya ma nọgide na-abụ otu n'ime ọgwụ ndị na-ewu ewu na-adịghị mma na ahịa.
Uru nke Raw Fasoracetam uzuzu bu ihe anecdotal, mana enwere nchoputa nke mbu iji kwado ihe ndi a. Dị ka ederede, a na-anwale ugboracetam ule na ule nke II / III maka usoro nlebara anya nke ọrịa hypractivity (ADHD) .
Akara ndị ọzọ a na-enweta na-emetụta nchedo nchekwa  dịka ọ na-adị n'ime ezinụlọ racetam. Enwerekwa nchekasị na mmetụta metụtara ọnọdụ ahụ nke a pụrụ ịsị na ọ na-emetụta mmepụta GABA na ụbụrụ . Ọ bụ ezie na ihe akaebe bụ ụkọ ma ọ bụghị ihe nkwekọ, enwere ọtụtụ ihe ọmụma na-egosi na ọ nwere ike bụrụ ihe dị irè nootropic maka arụmụka izugbe.
Nnyocha na-egosi na pramiracetam nwere ike:
Mee ka ọbara na-asọba
Kwalite ncheta oge ogologo na mmụta gbasara ohere gbasara ohere
Mee ka ịchọta ịkwado elu
Mụbaa nitric oxide synthase na cerebral cortex
Belata mmetụta nke ọgwụ ọgwụ amnesiac
Kedu ihe bụ FASORACETAM POWDER?
Fasoracetam Powder bụ ihe na-adịghị na ya na ezinụlọ racetam nke nootropics. Racetams gụnyere nnukwu ìgwè nke dị iche iche ogige, niile gbanwetụrụ site na ndị nne na nna Piracetam, nke chọpụtara na 1960s. Ụdị ihe ndị na-eme ka Burkinaracetam bụ: (5R) -5- (piperidine-1-carbonyl) pyrrolidin-2-one.
Fasoracetam nwere ike inyere aka meziwanye nchegbu na ọnọdụ ọnọdụ.
Kedu ka ọrụ FASORACETAM POWDER na-arụ?
Fasoracetam Powder na-arụ ọrụ site n'ịgbanwe ndị natara na ụbụrụ. Ọ na-arụ ọrụ na cholinergic, GABA, na ndị na-enweta glutamate, nke ha nile na-ekere òkè na ịmepụta na ichekwa ihe ncheta ọhụrụ. Dika otutu ogige nootropic na agburu ndi mmadu, Burkinaracetam Powder na emetụta ụbụrụ iji weta uru dị nro.
Ihe omumu na nyocha na-egosi na Burkinaracetam uzuzu nwere ike imezi ebe nchekwa na elekwasị anya, meziwanye nchekasị, ime ka obi dịkwuo ala, ọbụnakwa na-enye aka imeri ihe nkedo site n'inwe mkpali na iche echiche uche. Ndị ọrụ na-azụta ụkọ akụkọ nke ntụpọ Burkina Fasoracetam nwee ike ịmekwuwanye ihe, mụtakwuo nke ọma, ma nọgide na-enwe ntụsara ahụ mgbe ị na-enwe ume.
Fasoracetam Azu uzuzu
Raw Fasoracetam ntụ ntụ Marketing
Esi zụta ụkọ akpụkpọ azụ na AASraw
Fasoracetam Ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ:
Fasoracetam na-atụle uru, nhazi, mmetụta ndị ọzọ
1 nyochaa maka Fasoracetam ntụ ntụ
Fasoracetam ntụ ntụ bụ ihe ọmụma